Dugsiga Hoose/dhexe Ee wiil waal Oo Waxbarashadii Si Rasmi ah U bilaabay - Cakaara News
Dugsiga Hoose/dhexe Ee wiil waal Oo Waxbarashadii Si Rasmi ah U bilaabay
Jigjiga(cakaaranews)isniin 17ka October 2016. Dugsiga hoose- dhexe ee wiil waal ee maamulka magaalada jigjiga ayaa si rasmi ah u bilaabay waxbarashadii sanad dugsiyeedka 2009 TI iyadoo ardayda ladiwaangaliyay islamarkaana waxbarashada bilawday ay kor u dhaafyso 500 arday oo isugu jira lab iyo dhadig.
Hadaba Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee wiilwiil mudane khadar rashiid weerar oo u waramay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in si rasmi ah ay u bilaabeen waxbarashadii sanad dugsiyeedka 2009 T.I. wuxuuna intaa kudaray in ardayda ladiwaangaliyay sanadkan ay gaadhay 5353 arday kadib markii dadaal wacyigalin ah oo balaadhan ay siwada jira ah usameeyeen xafiisyada heer deegaan ilaa hee qabale.
Wuxuuna tilmaamay maamuluhu in dugsigu uu bilaabay waxbarashada baahida gaarka ah ee looyaqaano (especial need) taas oo wax lagubarayo ardayda laxaadka la’a.
Ugudanbayna, waxaa iyana dhankooda kahadlay qaarkamid ah macalimiinta dugsiga hoose dhexe ee wiil waal oo sheegay in ay sii labo jibaarayaan dadaalkooda ku aadan tayaynta waxbarashada ee sanad dugsiyeedkan 2009 T.I .